कसरी एक अभिनेत्री हुन? छ सपनाहरु तपाइँको सपना प्राप्त गर्न को लागी गठन र अध्ययन
अन्तिम क्यारियर परियोजना
काम बन्द गर्नुहोस्
कसरी एक अभिनेत्री हुन? छ सपनाहरु तपाइँको सपना प्राप्त गर्न को लागी
माइट निक्यूसा | 06/10/2021 23:44 | सुझावहरू
अभिनेत्री को पेशा सबैभन्दा प्रशंसनीय छ। जे होस्, यो पनि हुन सक्छ कि व्यक्ति बुझ्दछ कि त्यहाँ कठिनाई को एक ठूलो स्तर को व्याख्या को दुनिया मा सफल हुन को लागी छ। उनीहरुको उदाहरण अभिनेता र अभिनेत्रीहरु कि जनता लाई उनीहरुको उत्कृष्ट काम संग आश्चर्यचकित गर्दछ, ती मार्ग को यात्रा गर्न चाहनेहरु लाई प्रेरित गर्दछ। कसरी एक अभिनेत्री हुन? छवटा सुझावहरु तपाइँको सपना प्राप्त गर्न को लागी।
1 1. थिएटर कक्षाहरु एक अभिनेत्री हुन
2 २. एक दर्शक को रूप मा सिनेमा र थिएटर लाइभ
3 3. एक अभिनेत्री हुन को लागी अभिनय को स्कूल
4 4. व्यावसायिक पुस्तक
5 M. मार्गदर्शन
6 6. भावनात्मक खुफिया वर्गहरु
1. थिएटर कक्षाहरु एक अभिनेत्री हुन
थिएटर को जादू दर्शक कब्जा र, पनी, पेशेवरहरु जो जनता संग प्रत्यक्ष मुठभेड बस्छन्। त्यहाँ थुप्रै स्कूलहरु छन् कि कक्षाहरु सिकाउँछन् जसमा थिएटर को शौक खेती गर्ने मानिसहरु आफ्नो खाली समय मा भाग लिन्छन्। र अझै उनीहरुसँग महान प्रतिभा छ। एक सांस्कृतिक वातावरण हो कि तपाइँ व्याख्या को दुनिया को बारे मा अधिक जान्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ.
२. एक दर्शक को रूप मा सिनेमा र थिएटर लाइभ
कोही जो अभिनय को दुनिया मा काम गर्न चाहान्छन् उनीहरु लाई प्रशंसा गर्ने पेशेवरहरु बाट महान पाठ सिक्न सक्छन्। पेशेवरहरु जसले फिल्म, श्रृंखला, संगीत, र नाटकहरुमा काम गरेका छन्। मान्यता र पुरस्कार प्राप्त गरेको छ कि प्रस्तावहरु लाई विशेष ध्यान दिनुहोस्। तर, सामान्य मा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाइँ संस्कृति र यसको फरक अभिव्यक्ति संग सम्पर्क मा हुनुहुन्छ।
एक फिल्म बन्न को लागी जो एक अभिनेत्री बन्ने सपना देख्न प्रेरित गर्न सक्छन् ला ला ल्याण्ड हो। सफलता एम्मा स्टोन र रयान Gosling अभिनीत, यसको पात्रहरु को इतिहास, कठिनाइहरु फिल्म र संगीत मा बाहिर खडा गर्न को माध्यम बाट देखाउँछ।
3. एक अभिनेत्री हुन को लागी अभिनय को स्कूल
एक पेशा को अभ्यास संगै प्रशिक्षण संग जोडिएको छ। एक प्रशिक्षण कि वांछित तयारी प्रदान गर्दछ सिकाई संग व्यवसाय को पूरक को लागी महत्वपूर्ण छ। अभिनय स्कूलहरु पेशेवरहरु बाट बनेका छन् जो विद्यार्थीहरु को साथमा जो सिनेमा को दुनिया मा काम गर्न चाहान्छन्।
कसरी विभिन्न परियोजनाहरु को बारे मा जानकारी खोज्न को लागी? उदाहरण को लागी, संस्था को वेबसाइट र सामाजिक मिडिया जाँच गर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, प्रयोगकर्ताहरु द्वारा बनाईएको राय को केहि पढ्नुहोस्। तपाइँको प्रशिक्षण अवधि को दौरान, नेटवर्किंग सुदृढ। सम्पर्क को आफ्नो नेटवर्क बनाउनुहोस्.
4. व्यावसायिक पुस्तक
त्यहाँ विभिन्न संसाधनहरु र उपकरणहरु छन् कि बिभिन्न क्षेत्रहरु बाट पेशेवरहरु काम को लागी हेर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। पाठ्यक्रम vitae र आवरण पत्र को उपयोग को केहि साधन हो। खैर, जो एक अभिनेत्री को रूप मा काम गर्न चाहान्छन् पनि छविहरु को एक राम्रो संस्करण र प्रतिभा देखाउने एक चयन संग एक पेशेवर किताब बनाउन सक्नुहुन्छ।
प्रशिक्षण एक अभिनेत्री को रूप मा काम गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। एक प्रशिक्षण कि, अर्कोतर्फ, पनि आत्म ज्ञान सुदृढ। त्यहाँ सिक्न को लागी विभिन्न तरीकाहरु छन् कि तपाइँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। Mentoring सम्भावित तरिका मध्ये एक हो। यो समर्थन को माध्यम बाट, अनुभव र व्याख्या को दुनिया को ज्ञान संग एक व्यक्ति, उसको सल्लाह र सुझावहरु जो कि क्षेत्रमा काम गर्न चाहानुहुन्छ संग साझा गर्दछ।
6. भावनात्मक खुफिया वर्गहरु
एक चरित्र को expressiveness न केवल उनको मौखिक संचार मा बलियो छ, तर यो पनि उनको शरीर को भाषा मा। एक पेशेवर जो एक अभिनेता वा अभिनेत्री को रूप मा काम गर्दछ उसको आफ्नै शरीर धेरै राम्रो संग जान्दछ। अर्कोतर्फ, भावनाहरु अभिनेता को दैनिक काम को हिस्सा हो। तिनीहरू कुनै पनि भूमिका को व्याख्या मा हस्तक्षेप.
भावनाहरु र भावनाहरु शरीर मा प्रतिबिम्बित छन्। उदाहरण को लागी, मुस्कुराउने व्यक्तिको अनुहारमा खुशी देख्न सकिन्छ। दु: ख, यसको विपरित, पीडा अनुभव गर्नेहरुको नजरमा बुझिन्छ। यस कारण को लागी, भावनात्मक खुफिया मा प्रशिक्षण एक अभिनेत्री को रूप मा काम गर्न चाहनेहरु मा आत्म-ज्ञान सुदृढ।
अर्कोतर्फ, वर्तमान मा, तपाइँसँग संसाधनहरु छन् कि तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत ब्रान्ड बढाउन को लागी अनुमति दिनुहुन्छ। सामाजिक मिडिया एक पेशेवर उद्देश्य को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसरी एक अभिनेत्री हुन? उत्साह र दृढ संकल्प संग तपाइँको सपना प्राप्त गर्न छ सुझावहरु।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » सुझावहरू » कसरी एक अभिनेत्री हुन? छ सपनाहरु तपाइँको सपना प्राप्त गर्न को लागी
कसरी मनोचिकित्सा अध्ययन गर्ने
एक वैवाहिक वकील के हो
तपाईंको ईमेलमा प्रशिक्षण र अध्ययनको बारेमा उत्तम जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।